SomaliTalk.com » Warsaxaafadeed: Ra’iisl Wasaaraha oo maanta u dukaameysi tegay Suuqa Bakaaraha
Isha warka: Xafiiska Ra’iisul wasaaraha DFKMG.
1 Jawaab " Warsaxaafadeed: Ra’iisl Wasaaraha oo maanta u dukaameysi tegay Suuqa Bakaaraha "
Sunday, November 20, 2011 at 4:12 pm
waad salaaman tihiin somalitalk.
aniga si qaldan ayaan u arkaa in uu ganacsatada ku dhiirigaliyo suuqa bakaaraha oo wali Amaankiisa sugneyn sababtoo ah wali waxaa socda dagaaladii iyo qaraxyadii marka ilama fiicna in ay ku daydaan ra’isulwasaaraha waayoo asaga ciidan baa la socda cabsina ma qabo.
anigu waxan oran lahaa shacabka kala barkii waxay ku le’deen dagaaladan markale yaan been loo sheegin wadankii oo nabadiisa la hubin, haddii uu asaga ogyahay in wadanka uu nabad noqday kow asaga ha iska soo bilaabo oo haku wacyi galiyo asagoo kaligii ah oo aan la socan wax ciidan ah ama boolis.
intey ku halaagmi lahaayeen shacabka masaakiinta haka waaniyo in ay meelwalbaa tagaan sida uu hore usheegay shiiq shariif.